Madaxweyne Deni Oo Baarlamaanka Ka Baxay Isagoo Xanaaqsan. |
Madaxweyne Deni Oo Baarlamaanka Ka Baxay Isagoo Xanaaqsan.
Garoowe(GNN):-Kalfadhiga 45-aad ee baarlamaanka Puntland ayaa maanta ka furmay magaalada
Garoowe kaas oo ku bilowday weji aad u kulul iyo su’aal uu madaxweynaha si adag uga jawaabay.
Waxaa jiray hadal hayn ku saabsan in “mooshin la geyn doono” fadhiga iyo in “khilaaf uu ka dhex jiro dowladda”. Balse taa beddelkeeda hadallo kulul ayaa la isku dhaafsaday shirka.
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka, Cawil Daad oo fursadda ka faa’ideystay ayaa madaxweynaha weydiiyay su’aal u muuqatay in uu aad uga “carooday” sida ay BBC Somali u sheegeen qaar ka mid ah xildhibaannada iyo dadkii kale ee kulanka lagu casuumay.
Balse inta uusan Madaxweyne Deni ka jawaabin su’aashaas, waxaa hadlay Gudoomiyaha Baarlamaanka oo yiri: “Idinkoo sharfan, madaxweynuhu waa madaxweynihiinii, su’aalahana ha ahaadeen su’aalo hufan oo sharfan oo aan weerar ku ahayn shaqsi, dalka iyo dadkana maslaxaddiisa ah. Sidaas ayaan codsanayaa”.
Isagoo sii xoojinayay hadalkiisa wuxuu yiri: “Waxaa maanta wasaaradihii dowladda oo dhan ay joogaan magaalada Buuhoodle oo markaan xilka nimid uu khalkhal amni ka jiray”.
Wuxuuna sidoo kale ka hadlay tababarka ciidamada, baahinta mamulkiisa, sumcadda iyo horumarka dhaqaalaha iyo mushaar bixinta. Ka dib wuxuu dhalleeceeyay Xildhibaan Cawil iyo maamulkii hore wuxuu yiri: “Waxay ku guul darreysteen in ay bixiyaan mushaaraadka”.
“Gudoomiye waxyar”, ayuu yiri Deni oo doonayay in gudoomiyaha uu aamuso si uu hadalkiisa u sii wato.
Cawil Daad oo dib u soo laba kacleeyay wuxuu yiri “Gudoomiye su’aasheyda haka jawaabo madaxweynaha; meelo kale ayuu marayaa”. Laakiin waxaa loogu jawaabay in uusan “hadal dambe u furneyn”.
Laakiin madaxweyne Deni intaa kuma gaabsan ee wuxuu yiri “Waad aamuseysaa, nidaamka dowladnimda haddadan raacinna, adiga ayaa mas’uuliyaddeeda qaadaya”.
“Ma ahi nin lagu cabsiin karo in an waajibkeyga garan waayay, mana ahi nin loo sheegi karo danta iyo dawga dowladdani ay dooratay”, ayuu hadalka ku sii daray.
Ka dib madaxweyne Deni oo hadalkiisa soo afjaray ayaa fadhiga Baarlmanka isaga baxay. Waxaana la filayay in su’alo dheeraad ah ay weydiiyaan xildhibannada, balse taasi ma aysan dhicin.
Sidoo kale, qaar ka mid ah go’annadii uu horey u gaaray, waxaa ka hor yimid madaxweyne ku xigeenkiisa, Axmed Karaash, inkastoo aan si dhab ah loo ogeyn, in la xalliyay khilaafkaas iyo in kale.